@mmunited – Page3– UNITED WE STAND || A collective members from Myanmar
Ideas on Steem blockchain #9 – Curation Circle Creed
Curation Circle Creed ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီအကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် dust vote ကနေ စပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dust vote ဆိုတာကတော့ မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင် အမှိုက်ပေါ့။ ဘာမှ အသုံးမဝင်တဲ့ vote တွေပါ။ ၀.၀၂ အောက်နည်းတဲ့ upvote တွေကို dust vote လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုစ့်မှာ dust vote ပေးတာက သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ vote တဲ့သူတွေများလာရင် ပိုစ့် payout က တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ comment မှာပေးရင်တော့ အဲ့ဒိ vote က ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ 0.01 ထက်နည်းတဲ့ vote တွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မပေးရပါဘူး။ 0.01 ထက်များရင်တော့ ပေးလို့ …
This tools is created from witness @yehey. This is the link to use the above mention tool. https://steemyy.com/outgoing-votes/ I cannot makeascreen shot but you have to select Steemit – Outgong Vote Checker from the dropdown menu. Type your steemit name or upvoter name in Voter STEEM ID: text box. Type the author name in …